Madaxweyne Farmaajo oo Sacuudi Carabiya ku wajahan – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Farmaajo oo Sacuudi Carabiya ku wajahan
Madaxweyne Farmaajo oo Sacuudi Carabiya ku wajahan
Editor April 12, 2018 Warka 0
Muqdisho – (Madal Furan) Wararka ka imaanaya magaaladda Muqdisho ayaa sheegaya in Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo inuu u ambabixi doono dalka Sacuudi Carabiya saacadaha soo socda, kadib markii uu marti qaad ka helay Boqorka Sacuudiga.
Weli si rasmi ah looma oga ujeedadda martiqaadka Boqortooyadda Sacuudi Carabiya ay ugu yeertay Madaxweynaha Soomaaliya, waxaase warar lagu kalsoon yahay sheegayaan in Boqortooyadu ay dooneyso inay qaboojiso xiisadda siyaasadeed ee ay ku sii kala fogaanayaan dowladdaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo wefdi la socday ayaa xiligan waxay booqasho ku joogaan dalka Sacuudiga, kuwaasoo loo maleynayo inay u sii gogol xaarayaan socdaalka Madaxweyne Farmaajo uu ku imaan doono dalka Boqortooyadda Sacuudi Carabiya.
Dhexdhexaadinta ay dowladda Sacuudigu ku dooneyso inay ku dhex gasho Somaliya iyo Imaaraadka ayaa waxaa ka dhalan doona hadalo badan oo la xiriira barnaamijyada ay Imaaraadka Carabtu ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo sidii loo maareeyn lahaa.
Eng. Yariisow oo ka warbixin hawlgallo amni oo ka bilaabanaya Muqdisho
Dabcasar:-xiniinyaha, dhabarka, madaxa meel ii fiyow ma jirto Booliska S/land ayaa si xun ii garaacay
Aafar sano ka dib xafladii waxqabadka Dr. Gaas oo ku soo gabagabowday tuuladdaTuka Raq oo gacanta ka baxday, iyo Muusi Biixi oo dhoola caddeynaya